Arabia Saodita: Fantsom-pahitalavitra Amin’ny Teny Persiana Ho An’ny Iraniana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Oktobra 2017 14:13 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Español, فارسی, عربي, English
(Marihina fa tamin'ny 27 Jolay 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Orinasam-pahitalavitra mandeha amin'ny zanabolana Saodiana ny MBC , fantatra eo amin'ny tontolo Arabo noho ireo fantsona fialamboly sy noho ny fantsom-baovao Al-Arabiya. Nanomboka nanokatra fantsona vaovao tamin'ny 9 Jolay 2008 ity orinasa ity, MBC Persia, izay ahitana sarimihetsika amin'ny dikanteny Persiana [farsi].
Nanontany tena ilay bilaogera Saodiana Mohammed Abdullah Al Shahri [Ar] raha tena ilaina tokoa ity tetikasa ity:
Tamin'ny andro nanombohan'i Iran ny andrana balafomanga, izay niteraka ahiahy momba izay mety hitranga ao anatin'ny andro vitsivitsy ato amin'ny faritra misahotakotaka misy anay dia nanokatra fantsona vaovao amin'ny fiteny Persiana izay mandefa sarimihetsika amerikana natao dikanteny ny MBC.
Mety hanambara ny vanim-potoana vaovao amin'ny fomba fifandraisana amin'ny firenena lehibe sy manan-kery indrindra ao amin'ny faritra, Iran, ny fantsona vaovao, izay mandefa sarimihetsika Hollywood malaza voafantina, nadika amin'ny fiteny Persiana. Na izany aza, tsy araka ny zavatra nantenainay ity dingana voalohany ity . Hafatra inona no tiantsika halefa ary amin'ny fomba ahoana no hanantenantsika fa ho voarain'ny Iraniana izany rehefa hahita an'i Harrison Ford ao amin'ny andian-tantara Indiana Jones izy ireo na i Johnny Depp ao amin'ny Pirates des Caraïbes ?
Raha nanomboka fantsom-baovao maro samihafa i Iran dimy taona lasa izay mba hifandraisana amin'ireo Arabo amin'ny fitenin'izy ireo, sy afaka nanome ny heviny momba izay rehetra nitranga , mba hampiroboroboana ny laharam-pahamehana ara-politika sy handefasana vaovao avy amin'ny fomba fijeriny, nahoana no tsy manana fantsona na dia iray aza isika izay natao ho an'ny Iraniana amin'ny fiteniny ary ilazana amin'izy ireo ny zavatra eritreretintsika momba ny zava-mitranga? Izany no tsy ampy amintsika, ary fahalemena eo amin'ny fifandraisan'ny firenena Arabo manodidina ny Helodrano Persika miaraka amin'ity firenena lehibe ity.
Manantena aho fa hanomboka fantsona matotra sy manan-danja kokoa ny orinasam-pampitam-baovao lehibe tahaka ny MBC, izay mihevitra ny mety ho zava-dehibe ho an'ny mpijeriny amin'ny teny Persiana sy mihevitra fa mahasoa ny fantsona iray amin'io fiteny io. Saingy toa tsy miraika momba ity olana ity isika .